William Barr na-ekwu na ọ gaghị 'atụ ụjọ' na nzaghachi nke mwakpo ụda - New York Times - TELES RELAY
William Barr kwuru na ọ gaghị 'amaja' na nzaghachi nke mwakpo ụda - New York Times
Mr Trump boro ndị gbara akwụkwọ ebubo na ha bidoro nyocha "iwu na-akwadoghị" na Mr Stone. O boro onye ọka ikpe Jackson ebubo, bụ onye lekọtara ọtụtụ okwu na kansụl ahụ pụrụ iche, itinye onye isi oche mgbasa ozi ya mbụ, Paul Manafort, n'ụlọ mkpọrọ otu onye.
Onye isi ikpe ikpe obodo Washington Federal ikpe, Beryl A. Howell wepụtara nzaghachi ọha na eze na-adịghị ahụkebe na mwakpo onye isi ala na Tọzdee, na-ekwu "nkatọ ma ọ bụ nrụgide ọha na eze abụghị ihe kpatara" mgbe ndị ikpe na-eme ihe. ikpe mkpebi.
Maazị Trump wakporo Robert S. Mueller III, onye bụbu onye isi FBI na onye nkwado pụrụ iche, na-etinye Maazị Barr n'ọnọdụ siri ike karị. “Ọbụna Bob Mueller gha ụgha na Congress! " Onye isi ala dere na twitter n'izu a, na-ebo ya ebubo banyere mpụ, nke, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, a ga-achọ ka Attorney General na-ekpe ikpe.
Mr Trump akọwaghị n'oge ahụ ihe ọ pụtara, mana na redio Geraldo Rivera na Tọzdee o kwuru na ya na-ekwu maka agọnarị Mr Mueller n'oge ịgba akaebe na Congress na ọ rịọrọ ka ọ nọchie James B. Comey dị ka onye isi FBI tupu ọ bụrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche.
"Ọ chọrọ ịbụ onye nduzi ọzọ," Maazị Trump gwara Mr. Rivera. "Agwara m ya, n'ụzọ bụ isi," ịnweela oge. “E mesịa, n’oge na-adịghị anya, a họpụtara ya ịbụ onye ikpe pụrụ iche. "
Maazị Trump emeela nkwupụta a na-enweghị inye akaebe. Mazi Mueller kwuru na ya kwetara ịhụ Mr Trump n'oge ọ na-achọ onye nduzi FBI ọhụụ site n'ikike iji nye ndụmọdụ, ọ bụghị ịchọ ọrụ, ncheta nke Stephen K. Bannon gosipụtara, onye bụbu onye isi strategist nke onye isi ala.
Trump bidoro mkpesa ya na Tọzdee, na-ekwu na tweet na ndị na-ahụ maka ikpe na Stone nwere "ajọ mbunobi", ọgụ olu mbụ ya na mbuso agha. Ọ nọ na-aza akụkọ Fox News na onyeisiala bụ onye na - akwado ọchịchị Trump.
Esi gbanwee ihuenyo nke iPhone XR ka oji na ọcha ma ọ bụ gbanwee agba - VIDEO
Royal air Maroc gbochiri ndị ọrụ ụgbọ mmiri abụọ: foto ndị jọgburu onwe ha n'ọdụ ụgbọelu